Faahfaahino Laga Helayo Weerarka Banaadir Beach. – Calamada.com
Faahfaahino Laga Helayo Weerarka Banaadir Beach.
calamada August 26, 2016 2 min read
Waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ah ee ka dhashay weerar xoog ku gal ah oo habeenkii xalay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin kula wareegeen goobta Kilaabka iyo hoteelka isugu jirta ee Banaadir Beach oo ku taala gudaha xeebta Liido.
Saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta ayaa noo xaqiijiyey in weerarka uu ku bilowday qarax aad u xoogan, ka dibna uu xigay weerar toos ah oo ay goobta ku galeen Rag inqimaasiyiin ah oo watay bambooyin iyo hubka fud-fudud.
Saraakiishu waxay noo sheegeen in halyeeyada inqimaasiyiinta ay gaariga ka daateen ka dib markii uu qaraxu dhacay, islamarkaana ay bilaabeen in ay dhameystiraan wixii ka bad-baaday weerarkii hore, ayna sidoo kale u suuragashay in ay gudaha u galaan dhismaha.
Tobaneeyo ruux ayaa la rumeysan yahay in ay ku dhinteen qaraxii koowaad ee lagu furay weerarka iyo toogashada ay halkaas ka geysteen walaalada inqimaasiyiinta balse ilaa hadda lama oga tiro rasmi ah.
Dhismaha la weeraray oo lagu magacaabo Banaadir Beach ayaa ah Kalaab lagu tunto oo xilliyada habeenkii ay isugu yimaadaan dadka fisqiga iyo fasahaadka ku caanbaxay iyo Shaqaalaha murtadiinta gaar ahaan hay’adaha jawaasiista sida ay noo sheegeen ilo wareedyo dhanka Mujaahidiinta ah.
Maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isku gedaamay hareeraha dhismaha uu weerarka ka socdo mana jirto cid u soo dhawaan karta, waxaana adag in la ogaado qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay goobta.
Halyeeyada inqimaasiyiinta ah ayaa durbaba markii ay la wareegeen dhismaha, waxay difaacyo iyo gabaad adag ka sameysteen gudaha dhismaha, waxayna iska caabiyeen isku dayo dhowr ah oo cadowga uu ku doonayey in uu gudaha ku soo galo.
Walaalaha ayaa sidoo kale ku guuleystay in ay damiyaan korontada dhismaha, uuna cadowga ku dhiiran waayo in uu howlgalka soo gabagabeeyo habeenkii xaley ahaa.
Aroornimadii hore ee saaka ayey sidoo kale ciidamo aad u fara badan isugu keeneen goobta si looga soo afjaro weerarka balse geesiyada Islaamka ee ku jiray dhismaha ayaa si adag isaga caabiyey.
Howlgalkan ayaa qeyb ka ah silsilado weeraro ah oo Xarakada Mujaahidiinta AlShabaab ay ku beegsatay xarumaha caanka ku ah fisqiga ee sidoo kalena ay ku caweeyaan shaqaalaha iyo Saraakiisha kooxda ridada Soomaaliya, Wuxuuna weerarkan ku soo aadayaa iyadoo dhowrjeer ay Mujaahidiintu dadka uga digeen in ay tagaan dhismayaasha ku yaalla xeebta Liido ee hadafka u ah Mujaahidiinta.
Previous: Qarax Saraakiil Lagu Dhaawacay Oo Baardheera Ka Dhacay.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 23-11-1437 Hijri.